Fanaovana maloto ankalamanjana: manota fady ny sahan-driaka sy ny tahirin-drano | NewsMada
Nomarihina tao amin’ny kaominina Mantasoa omaly ny andro iraisam-pirenena ho an’ny kabone. Nofidiana manokana ny ao Mantasoa noho ny fananany tahirin-drano sy sahan-driaka midadasika izay saropady ka mila tandrovana amin’ny loto.
“Fahadiovana ma­ha­ritra, fanoitra amin’ny fiovaovan’ny toetrandro”. Io no lohahevitra novoizina nandritra ny fanamarihana ity ndron’ny kabone ity. Nen­tina nanairana ny sain’ny olo­na sy ho fampahtsiahivana ny mponina fa manota fa­dy tanteraka ny tahirin-dra­no fisotro madio sy ny sa­han-driaka ny fanaovana ma­loto ankalamanjana.
Nanome toky ary nametraka fanamby ireo ben’ny ta­nàna ao amin’ny distrikan’ i Manjakandriana rehetra fa hanaja ny fahadiovana ary ha­natratra ny tanjona tsy hi­sian’ny fanaovana maloto an­kalamanjana ho fiarovana ireo rano ao an-toerana izay mamatsy indrindra an’Anta­na­narivo. Nisy ny sonia na­taon’izy ireo am-pahibemaso tamin’izany ho fanamafisana io ady iombonana io.
Miparitaka ny loto rehefa hatao ankalamanjana ary en­tin’ny riaka na ny rivotra any amin’ireny rano fisotro ire­ny. Havarin’ny riaka any an-tanimbarysy ny fambolena ary amin’ny trano fonenana manodidina.
Mitera-doza ho an’ny mponina izany ary manimba ny hasin’ny tenan’ny olombelona mihintsy aza satria naman’ny mampihinana ma­loto olona ireo manao izany ankalamanjana. Ankoatra ny maha-maty hasina ny maha-olona sy ny ota fady, mitondra aretina maro koa ny fiparitahan’ny maloto ankalamanjana. Anisan’izany ny aretim-pivalanana izay mbo­la mamono indrindra ny an­kizy madinika eto amintsika.
Tanjon’ny taona 2025
Tanjon’ny minisiteran’ny rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana ny hanafoana ny fanaovana maloto anklamanjana amin’ny taona 2030. Haroso amin’ny taona 2025 anefa izany tanjona kendrena izany ka mitaky ezaka mafy amin’ny tsirairay.
Mila ampitoboina ny tetibola ho an’ny rano sy fidiovana ary fahadiovana indrindra ny fampandraisana an­drai­kitra ireo sehatra tsy miankina.
Ho isan’ny tanàna modely amin’ny tsy fisian’ny fa­na­ovana maloto ankalamanjana intsony ny faritra An­a­lamanga amin’ity taona ity. Hiitatra amin’ny faritra hafa izany ka tsy maintsy tratra ny tanjona, hoy ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny rano, Randriatsiferana Simon.
Hapetraka ny kabone modely sy moderina izay hampirisihana ny rehetra ny hanangana azy amin’ny alalan’ny akora misy any aminy avy.
37,6%-n’ny Malagasy ihany no manana kabone. Mbola manao maloto ankalamanjana ny 62,4% ka manaparitaka izany eny rehetra eny. Olona 7 amin’ny 10 araka izany no mbola manaparitaka ny malotony ka manelongelona ny hafa ary mitera-doza ho an’ny fiarahamonina. Mafagasikara madio no filamatra sy tanjona kendrena.